08/05/2018 - Page 2 sur 3 -
Vonoan’olona teny Ambohidratrimo : Nidoboka eny Tsiafahy ilay raim-pianakaviana
Notanana am-ponja vonjimaika avy hatrany ny raim-pianakaviana iray voalaza fa tompon’antoka tamin’ny fidarohana ka nitarika ny fahafatesan’ny vadiny, taorian’ny nanolorana ny raharaha tao amin’ny fampanoavana. Tonga nanatrika ny fanatanterahana ny fakana am-bavany ity rangahy nahavanon-doza …Tohiny
Hasarota-piaro diso tafahoatra : Nokapain’ilay rangahy tamin’ny antsibe ny vadiny
Habibiana tsy roa aman-tany no niafaran’ny adin’ny mpivady niseho tany Mazavalagnitra, kaominina ambanivohitr’i Maroharatra, distrikan’Ifanadiana ny harivan’ny sabotsy lasa teo. Diana zava-maranitra miisa efatra teo amin’ny faritry ny lohany , ny hatony ary ny lamosiny …Tohiny
Niditra tamin’ny andro fahatelo omaly, ny fifanintsanana amin’ny « Festival Moudjangaya M’chimé » eo amin’ny taranja basket sy beach soccer. Fifaninanana tanterahina amin’izao fotoana izao any Mahajanga ao amin’ny Complexe Sportif sy eny amin’ny torapasiky …Tohiny
Efa ho herinandro vitsivitsy izao no manaraka fitsaboana etsy amin’ny HJRA Ampefiloha Eric Rakotoarimanana, na i Eric Fou Hehy. Aretin’ny tsy fahampian’ny fiasan’ny voa no manjo azy, izay tokony hoentina hanaovana famindrana voa any ivelany. …Tohiny